निरुताको दरिलो कमब्याकको सपना सपनामै सीमित
काठमाडौ, २६ वैशाख । दरिलो कमब्याकको प्रतीक्षामा रहेकी अभिनेत्री निरुता सिंह ‘दाल भात तरकारी’बाट निकै आशावादी थिइन् । नहुन् पनि किन ? ब्यानर नेपाली फिल्म उद्योगमा जमेकाहरुकै थियो । अभिनेता, अभिनेत्रीहरु एकसा एक । कथा, पटकथा उस्तै । दर्शक पनि निरुता जस्तै थिए । तर के गर्नु ?
जति ठूलो हस्तीहरुको भीड भएपनि फिल्म खोटो सिक्का निस्कियो । निरुताको दरिलो कमब्याकको सपना सपनामै सीमित रह्यो । यति मात्र भएको भए त हुन्थ्यो नि ! चुलबुले भूमिकाले दर्शकको मन टक्क अडेकी निरुता यो फिल्मको लाउड अभिनयले ठ्क्क झरिन् ।
एक त ओह्रालो लागिरहेको करियर, त्यसमा पनि कमब्याकमै आफ्ना फ्यानहरु रिसाउनु सुखद हुने कुरै भएन । यस्तै हो निरुताजी, हुनेहार निराश नहुनुस् । अर्को फिल्म गर्दा ब्यानर मात्रै नभएर कन्टेन्ट पनि विचार गर्नुहोस् । शुक्रबार साप्ताहिकमा खबर छ ।
फिल्म लव आजकलको पहिलो दिनको कमाई कति ?
‘विवाहको कुरा हल्लामात्रै’
साना खानले ब्रेकअपको कारण खोलिन्, पूर्वप्रेमीलाई यस्तोसम्म गाली
राजमौली र प्रभासको फिल्म नजुध्ने
इरफान खानले फिल्म अंग्रेजी मिडियमको प्रचार गर्न नसक्ने
बलिउडमा बलियो स्टारडम भएका अभिनेता सैफअली खान
ओस्कार अवार्ड जितेर इतिहास रचेको कोरियाली फिल्म ‘प्यारासाइट’मा के छ ?
बालनाटक ‘करेसा कन्सर्ट’को नियमित मञ्चन, के भन्छन् निर्देशक श्रेष्ठ ?
दक्षिण कोरियाली फिल्म ‘प्यारासाइट’ले ओस्कार अवार्डमा इतिहास रच्यो